नेपाल आएका डब्ल्यूएचओ प्रमुख हसिलो मुद्रामा ढाका टोपीमा, नेपालको यसरी गरे प्रशंसा – Annapurna Post News
April 22, 2022 sujaLeaveaComment on नेपाल आएका डब्ल्यूएचओ प्रमुख हसिलो मुद्रामा ढाका टोपीमा, नेपालको यसरी गरे प्रशंसा
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) का महानिर्देशक डा. टेड्रोस अधानोम गेब्रेयससले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासँग भेटवार्ता गरेका छन् ।बिहीवार काठमाण्डौ आइपुगेका डा. गेब्रेयससले अध्यक्ष तिमिल्सिनालाई सिंहदरबारमा भेट गरेका हुन् । भेटवार्ताका क्रममा नेपालमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा सहयोग गरिरहने कुरामा छलफल भएको थियो ।
भेटमा डब्ल्यूएचओ र नेपालबीचको सम्बन्ध आउँदा दिनमा अझ प्रगाढ रहने कुरामा छलफल भएको थियो । भेटमा महानिर्देशक गेब्रेयेससले नेपाल आएर खुसी लागेको र डब्ल्यूएचओले निरन्तर सहयोग गरिरहने बताए। उनले भने ‘नेपाल आएर खुसी लागेको छ । हाम्रो सहयोग जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा रहिरहनेछ । हामीले सकेको सहयोग नेपाललाई गर्नेछौँ ।’
भेटवार्ताको क्रममा डा. गेब्रेयससले कोभिड–१९ को खोप लगाउने सम्बन्धमा नेपालले नमुनायोग्य काम गरेको भन्दै प्रशंसा गरेका थिए ।
त्यस्तै डा. टेड्रोस र स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाबीच पनि भेटवार्ता भएको छ । हिजै टेड्रोसले दिउसो सवा तीन बजे स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पुगेर मन्त्री खतिवडासंग भेटवार्ता गरेका हुन् ।
सो अवसरमा स्वास्थ्य सचिवद्धय देवकुमारी गुरागाईँ, डा रोशन पोखरेल, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा दिपेन्द्ररमण सिंह लगायतका सरकारी उच्च अधिकारीहरुको उपस्थिति थियो । डव्लुएचओको तर्फबाट दक्षिणपूर्वी एशियाका क्षेत्रीय निर्देशक डा पुनम क्षेत्रपाल सिंह र अरु उच्च अधिकारीहरुको सहभागिता थियो । करीब ४० मिनेट लामो भेटवार्तामा मन्त्री खतिवडाले डव्लुएचओले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको सहयोगको प्रशंसा गरेका थिए ।
सो अवसरमा उनले गत सेप्टेम्बरमा नेपालले कोभिड १९ महामारीको जोखिमका बीचमा दक्षिणपूर्वी एसियाका लागि क्षेत्रीय समिति सेरोको ७४ औँ सत्र सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको सुनाए । यस्तै सन् २०१५ मा आएको भूकम्पपछि नेपालमा ठूलो स्वास्थ्य संकट आईपरेका बेला आपतकालिन समयमा समेत डव्लुएचओले विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन २०१५ को साइड इभेन्ट नेपालमा आयोजना गरिदिएको स्मरण गर्दै सो कार्यको प्रशंशा गरेको बताए ।
मन्त्री खतिवडाले पछिल्लो समय कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि डव्लुएचओले गरेको सहयोगको खुलेर तारिफ गरे । उनले यो बीचमा डव्लुएचओले सरकारसंग मिलेर गरेका मुख्य मुख्य कामहरुबारे समेत बताएका थिए ।